शिपिंग, डिलिवरी, रिफन्ड र रिटर्न नीति - किनमेलडायरेक्ट 24.com - SD24
घर > शिपिंग, डेलिभरी, रिफन्ड र रिटर्न नीति
हामी सबै कुराको लागि विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय शिपिंग प्रस्ताव गर्यौं! हामी ढुवानीको लागत लुकाउँछौं - जहाँपनि तपाईं हुनुहुन्छ!
चीन, हांगकांग वा शंघाईमा उत्पादकहरू, गोदामों, आपूर्तिकर्ताहरू वा वितरकहरूबाट प्याकेजहरू EPacket द्वारा पठाईनेछ भने तपाईंको देशको लागि छिटो वितरण र अन्यथा उपलब्ध सबै भन्दा बढि किफायती सेवाहरूको लागी उपलब्ध छ।
अन्य भौगोलिक स्थानहरूबाट उत्पन्न हुने उत्पादनहरूको लागि शिपिङ मानक शिपिंगको प्रयोग गरेर प्रदर्शन गरिनेछ, जबसम्म अन्यथा निर्देशन दिइएन।
मांग उत्पादनहरू मा बनाइएका उत्पादनहरू र उत्पादन मुद्रण र उत्पादन साझेदारहरूमा बनाइएका मध्ये एकद्वारा उत्पादित र पठाइनेछ। अधिकांश उत्पादन उत्पादन उत्पादन र ढुवानी सुविधाहरूमा बनाइएको धेरै महाद्वीप र देशहरूमा (अमेरिका, विभिन्न ईयू देशहरू र अष्ट्रेलिया) छन्। अधिकतर अवस्थामा तपाईँलाई नजिकैको सुविधा उत्पादन र उत्पादन गर्न प्रयोग गरिनेछ। उदाहरणका लागि यदि तपाइँ एक ईयू नागरिक हुनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई सीमा शुल्क वा अन्य आयात समस्याहरूको समस्याहरूबाट बच्न ईयूबाट उत्पादन र जहाज गर्न प्रयास गर्नेछौं। यूएसका लागि, अष्ट्रेलिया र अन्य क्षेत्रहरू र काउन्टीहरू समकक्ष समाधान उपलब्ध छन् र उपलब्ध हुनेछ भने लागू गरिनेछ। अपवादहरू प्राविधिक कारणहरू वा उत्पादन भण्डारण स्तर र उपलब्धताको लागि आवश्यक हुन सक्छ र आवश्यक हुन सक्छ।
अन्य अनलाइन रिटाईजस्तैlers, we कुनै पनि अनुकूल शुल्क, आयात कर वा सामानहरू पठाइएको बेला स्थानीय ह्यान्डलिङ शुल्कको लागि जिम्मेवार राख्न सकिँदैन। सीमा शुल्क सर्तहरू देश अनुसार भिन्न हुन्छन् र त्यहाँ पनि लगातार परिवर्तनहरू छन्। हाम्रा उत्पादनहरू खरिद गरेर, तपाइँलाई एक अर्डरका लागि एक वा बढी प्याकेजहरू तपाईंलाई पठाइएको हुन सक्छ र अनुकूलन फीसहरू प्राप्त गर्न र शुल्क लगाउँदा तपाईंको देशमा पुग्न र तपाईंको देशमा कानुन अनुसार निर्भर हुन सक्छ।
तपाईं सोध्न चाहानुहुन्छ वा तपाईंको देशका सीमा शुल्क सर्तहरू आदेश गर्नु अघि अनलाइन खोज्नुहोस्। सामानको विशाल बहुमत बिना त्यस्ता समस्याहरू आइपुग्छ।
ढुवानी समय स्थानद्वारा भिन्न हुन्छ। यी हाम्रो अनुमान हुन्, तर ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन:
संयुक्त राज्य अमेरिका 4-15 व्यापारिक दिन
क्यानाडा, युरोप 6-25 व्यापारिक दिन
अष्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड 6-30 व्यापारिक दिन
केन्द्रीय र दक्षिण अमेरिका 15-55 व्यापारिक दिन
अन्य गन्तव्यहरू 15-55 व्यापारिक दिन
हो, तपाईंको अर्डरको लागि उपलब्ध छ भने हामी ट्र्याकिङ सूचनाको प्रयोग गर्नेछौं। तपाईंको अर्डर जहाजहरू जुन तपाईंको ट्र्याकिङ जानकारी समावेश गर्दछ तपाईंले एक इमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ।
केही ढुवानी कम्पनीहरूको लागि, यसले तपाईंको अर्डर प्रशोधन गर्न 1-5 दिन लिन्छ र प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न ट्र्याकिङ जानकारीको लागी यसले थप 2-5 व्यापारिक दिन लाग्न सक्छ। यदि तपाईंको अर्डर6व्यापारिक दिन भन्दा बढी राखिएको छ र तपाईंको ट्र्याकिङ नम्बरमा अझै पनि कुनै जानकारी छैन, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
तर्कसंगत कारणहरूको लागि, त्यही खरिदमा वस्तुहरू कहिलेकाहीँ फरक प्याकेजहरूमा पठाइनेछ।
यदि तपाईं सँग कुनै अन्य प्रश्नहरू छन् भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई सहयोग पुर्याउनेछौं।
रेफन्ड र रिटर्न नीति
कुनै पनि फिर्ती वा उत्पादन फिर्ती अनुरोध को लागी कारण हुनसक्छ, हामी सँधै राम्रो रिजोल्युशनको लागि प्रयास गर्नेछौं!
सबै आदेशहरू रद्द नगरेसम्म रद्द गर्न सकिन्छ। यदि तपाईंको अर्डर भुक्तानी गरिएको छ र तपाईंलाई परिवर्तन गर्न वा अर्डर रद्द गर्न आवश्यक छ भने तपाईले हामीलाई तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुपर्दछ। एकपटक प्याकेजिङ्ग र ढुवानी प्रक्रिया सुरु भएपछि, यसलाई अब रद्द गर्न सकिँदैन।
तपाईले रकम फिर्ता गर्नुहुँदा:
- तपाईले आदेश दिनुभएको वस्तु प्रतिज्ञा गरिएको समय भित्र पुगिएन - हाम्रो प्रो-फारम 60 दिनको डेलिभरी डिलीवरी भएको छ, र धेरै उत्पादनहरू पहिले नै आइपुग्छन्।
- तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको वस्तुलाई वास्तविक हुन आश्वस्त भयो, तर नकली थियो
यदि कुनै पनि कारणको लागि तपाई तपाईले प्राप्त गर्नुभएको उत्पादन चाहानुहुन्छ तपाईं फिर्ती अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ तर तपाईलाई वस्तु फर्काउनु पर्छ र वस्तु अप्रयुक्त र मूल प्याकेजिङमा हुनुपर्छ। वैकल्पिक रूपमा, अर्थव्यवस्थाको कारण (विशेष गरी कम मूल्यका उत्पादनहरूका लागि) र हाम्रो निर्णय अन्तर्गत तपाईंले उत्पादनलाई नष्ट गर्न अनुमति दिन सक्नुहुनेछ र हामीलाई फाइटो-प्रमाण पठाउनुहोस् - यस विकल्पको लागि कृपया हामीलाई पहिले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी वस्तुको लागि फिर्ती ठेगाना सल्लाह गर्नेछौं।
रकम फिर्ता गर्न सकेन भने गलत वस्तु रङ, आकार, वा मोडेलको सन्दर्भमा (प्रमाण आवश्यक छ [फोटो]।
यदि टीउनी अत्यन्तै खराब गुणस्तरमा आइपुग्यो (प्रमाण आवश्यक छ [फोटो])।
तपाईंले आफ्नो मेल डिलिवरी सेवालाई सम्पर्क गर्न आवश्यक छ भने:
- प्याकेज क्षतिग्रस्त अवस्थामा आइपुगेको छ
- अर्डर हराइरहेको थियो
कृपया ध्यान दिनुहोस् कि आकारको माप दिइएकोले थोडा सार्थक हुन सक्छ, किनभने मापन प्रायः म्यानुअल रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
उत्पादन फ्यानहरूमा रङहरू रोमी प्रभाव, क्यामेरा कोण वा कम्प्यूटर डिस्प्ले प्रदर्शनका मुद्दाहरू जस्तै फरक हुन सक्छ।
हामी तपाईंको लागि मांग मा बनाएको उत्पादनहरु मा फिर्ता स्वीकार गर्न सक्दैनौं। उत्पादन उत्पादनहरू मा निर्मित उत्पाद विवरण जस्तै पहिचान गरिएको छ।
रकम फिर्ता गर्न सकिँदैन यदि:
- तपाईंको आदेश भित्रका कारकहरूको कारणले गर्दा तपाईंको आदेश आयो (यानी गलत शिपिंग ठेगाना प्रदान गर्नुहोस्, विस्तारित अवधिको लागि घर बाट टाढा र / वा तपाईंको पोस्ट अफिस द्वारा पूर्वनिर्धारित रूपमा पठाइएको थियो)
- हाम्रो नियन्त्रण बाहिर रहेको असाधारण परिस्थितियोंको कारण तपाईंको अर्डर आइपुगेको थिएन (यानी सीमा शुल्क द्वारा खाली छैन, प्राकृतिक आपदा द्वारा विलम्बित)।
हाम्रो नियन्त्रण बाहिर अन्य असाधारण परिस्थितियां।
तपाईं 15 दिन भित्र डिलिवरी अवधि (60 दिन) को ग्यारेन्टी अवधि पछि रिफन्ड अनुरोध अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं यसलाई सम्पर्क पृष्ठ पृष्ठमा सन्देश पठाउन सक्नुहुनेछ।
कृपया ध्यान दिनुहोस् किउनी चेकआउट र भुक्तान प्रक्रिया कम्पनीले एमएलवीईए द्वारा व्यवस्थित गरीएको छ र तपाइँलाई त्यस प्रक्रियाको लागि उनीहरूको पृष्ठमा पुन: निर्देशित गरिनेछ। चेकआउट र भुक्तानी तपाईंको चुनेको मुद्रामा गरिन्छ।